Ogaden News Agency (ONA) – Booliska Spain oo Toogtay Ninkii Gaystay Weerarkii Barcelona.
Booliska Spain oo Toogtay Ninkii Gaystay Weerarkii Barcelona.
Posted by ONA Admin	/ August 23, 2017
Ciidamada Amaanka ee dalka Spain ayaa toogasho ku dilay ninkii ay maalmahan baadi goobayeen ee ahaa darawalkii gaadhigii gaystay weerarkii Khamiistii ka dhacay magaalada Barcelona oo lagu dilay 14 qof oo rayid ah.
Yuunis Abu Yacqub oo asal ahaan kasoo jeeda Marooko ayaa lagu dilay magaalada Subirats Isniintii, booliiska ayaa sheegay inuu xirnaa suunka la isku qarxiyo. Dadka rayidka ah ayaa booliiska u sheegay nin ay ka shakiyeen oo ku sugnaa magaaladaasi, markii ay askarta tageen goobta si ay u baadhaan ninkaasi ayuu wuxuu lasoo baxay wax u muuqday suunka bambaanada la isku qarxiyo taasi oo keentay inay ciidamada toogtaan, wuxuuna ku dhintay isla goobta.
Booliiska ayey wakhti ku qaadatay inay baadhaan suunka uu ninkaasi xidhnaa inuu ahaa mid been ah ama bambaano ah iyo inkale. Waxaase markii danbe cadaatay in waxa uu sitay ay ahayd bambaano been ah. Ciidamada Spain ayaa baadi goob xoog leh ugu jiray ninkaasi tan iyo weerarkii khamiistii dhacay, waxaana la sheegay inuu ka baxsaday magaalada Barcelona isagoo qof rayid ah mindi ku dilay kadibna ka qaatay gaadhigiisa.
Dhinaca kale dowlada Spain ayaa xaqiijisay inuu isaguna dhintay ninkii hogaamiyaha u ahaa kooxda weerarada geystay todobaadkii hore oo lagu sheegay Imaam Abdelbaki Es Satty, kaasi oo la xaqiijiyey inuu ku dhintay qaraxii Arbacadii ka dhacay magaalada Alcanar, halkaasi oo uu ku rakibayey bambaano weyn oo uu doonayey in uu saaro gaadhiga.
Kadib qaraxaasi ayey kooxdii kale bilaabeen weeraradii Barcelona iyagoo ka cabsi qabay in booliiska uu ogaado qorshaha ay damacsanaayeen. Kooxda Daacish ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaasi.